Sisi oo ka codsaday Trump inuu Ikhwaanka u aqoonsado Koox Argagaxiso? • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Sisi oo ka codsaday Trump inuu Ikhwaanka u aqoonsado Koox Argagaxiso?
Sisi oo ka codsaday Trump inuu Ikhwaanka u aqoonsado Koox Argagaxiso?
May 1, 2019 - By: Maxamed Cismaan
Xukuumada Maraykanka ee Donald Trump ayaa lagu wadaa inay ku dhawaaqdo in ay ururka Ikhwaan muslimiinka u aqoonsatay koox argagaxiso ah, arrintan oo la sheegay inuu Maraykanka ka codsaday Madaxweynaha Masar Cabdifatax al Sisi.
Kulan magaalada Washington ku dhexmaray Trump iyo Sisi 9kii bishii April ayaa la sheegay in looga hadlay qorshaha uu doonayo Sisi inay ka caawiyaan Maraykanka.
Jariirada New York Times ayaa Salaasadii shalay warbixin ay qortay ku faah faahisay qorshaha Maraykanka wado, waxaana arrintan markii danbe xaqiijiyey afhayeenka Aqalka Cad.
Ururka Ikhwaan Muslimiinka ee la dhisay 1928dii ayaa kamid ah ururada Islaamiga ah ee ugu qadiimsan, waxayna sheegeen inaysan u joogsan doonin qorshaha Maraykanka iyo Sisi wadaan oo ay shaqadooda sii wadan doonaan sida lagu qoray Website-kooda.
Cabdifatax Al sisi oo xukunka dalka Masar ku qabsaday inqilaab militari ee xukuumadii Maxamed Morsi oo ay shacabka doorteen, ayaa cabsida ugu weyn ka qaba ururkaasi taageerada badan kuleh dalka Masar, waxayna xukuumada militariga horey xabsi iyo dil ugu xukuntay hogaanka sare ee Ikhwaan muslimiinka.